अब यसरी थाहा हुन्छ तपाइलाई हर्ट अट्याकको जोखिम छ कि छैन ? - hamro Desh
अब यसरी थाहा हुन्छ तपाइलाई हर्ट अट्याकको जोखिम छ कि छैन ?
पछिल्लो समय जताततै मुटुका रोगी बढिरहेका छन् । खानापान, रहनसहन र व्यायामको कमीका कारण कम उमेरमै पनि मुटुको रोगले पीडित बन्नुपरेका धेरै छन् ।
मुटुको रोग लागेपछि जतिबेला पनि हर्टअट्याक अर्थात हृदयघात हुन सक्छ र ज्यानैसम्म जान सक्छ । तर अब चिन्ता नगर्नुस् बैज्ञानिकहरुले यस्तो खोज गरेका छन् कि जसको माध्यामबाट कसलाई हर्टअट्याक हुनसक्छ भनेर सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको अनुसन्धान टोलीले भनेको छ, यो अध्ययनले विश्वमै मृत्युको सबैभन्दा ठूलो कारण बन्ने गरेको मुटु रोगको उपचारका लागि ठूलो सहयोग मिल्नेछ ।
यो नयाँ तरिकामा मुटुका धमनीहरुको जाँच गरेर हर्ट अट्याकको खतरा छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाइन्छ । जसले गर्दा संभावना बढी भएकालाई त्यहि अनुसारको उपचार पहिला नै सुरु गर्न सकिन्छ ।
अध्ययनका क्रममा झण्डै २ हजार जनाको मुटु स्क्यान गरेर स्वस्थ देखिने मानिसमा हर्ट अट्याकको संभावना पत्ता लगाउन कत्तिको उपयोगी हुन्छ भनेर अध्ययन गरिएको थियो । मुटुका धमनीमा रगत सर्कुलर हुन नपाउँदा अक्सिजनको कमी भएपछि हर्ट अट्याक हुन्छ ।एजेन्सी ।